इतिहासमा आज- आमा बिरामी भएपछि ९ वर्षदेखि काम गर्न थालेका थिए संसारलाई हसाउने चार्ली च्याप्लिन, पढाई पनि छुट्यो…. – News Nepali Dainik
इतिहासमा आज- आमा बिरामी भएपछि ९ वर्षदेखि काम गर्न थालेका थिए संसारलाई हसाउने चार्ली च्याप्लिन, पढाई पनि छुट्यो….
प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ २०, २०७७ समय: १०:०९:४२
(चार्ली) च्याप्लिनको नाम नसुन्ने सायदै होलान् । उनी एउटा यस्ता क्षमतावान् कलाकार थिए जसले आफ्नो अभिनयमार्फत् संसारलाई खुबै हसाए । आजकै दिन सन् १९१४ मा चार्लीको पहिलो फिल्म रिलिज भएको थियो ।***** यसको नाम ‘मेकिङ अ लिभिङ’ थियो । यसमा उनले कएक ठगको भूमिका निभाएका थिए । फिल्मलाई हेनरी लेहरमनले लेखेका र निर्देशन गरेका थिए ।**** यो फिल्म १५ मिनेटको थियो । यो फिल्म कमेडी थियो र पूर्ण रुपमा साइलेन्ट मुभी थियो, अर्थात् यसमा आवाज थिएन, मात्र अनुहार र शरीरको हाउभाउ थियो । यो फिल्ममा चार्लीले आफ्नो अभिनयमार्फत् मानिसहरुलाई असाध्यै हसाए । यो फिल्म चार्ली च्याप्लिनको करियरको टर्निङ पोइन्ट पनि साबित भयो ।*****
चार्लीको जन्म सन् १९९८ अप्रिल १६ मा लण्डनको असाध्यै गरिब परिवारमा भएको थियो । पूरा नाम चार्ल स्पेन्सर च्यापलिन थियो । उनी निकै सानोमा उनका आमाबुवाको सम्बन्धविच्छेद भएको थियो । आमा मानसिक रोगको शिकार भएकी थिइन् ।**** घर चलाउने बोझ चार्लीमा परेपछि उनले बाल्यकालमा नै पढाई छोड्नुपरेको थियो । ९ वर्षको उमेरमा नै उनले काम गर्न सुरु गरे ।**** अभिनयको शौख थियो, त्यसैले स्टेज कलाकार र हास्यकलाकारको रुपमा आफ्नो भाग्य जोख्न थाले । उनको अभिनय कला देखेर एउटा कम्पनीले उनलाई अनुबन्ध गर्यो ।**** त्यसपछि उनी अमेरिका गए । उनको लामो फिल्म सन् १९२१ मा ‘द किड’ नामबाट आयो । उनको चर्चित फिल्ममा ‘अ वुमन अफ पेरिस, द गोल्ड रश, द सर्कस, सिटी लाइट्स, मोर्डन टाइम्स’ रहेको छ । यी फिल्मलाई आजपनि निकै रुचाइन्छ ।
चार्लीको व्यावसायिक जीवनसँग सम्बन्धित एउटा विवाद पनि रह्यो । यो फिल्म थियो – द ग्रेट डिटेक्टर । यसमा चार्लीले एडोल्फ हिटलको भूमिका निभाएका थिए । उनीमाथि कम्युनिष्ट भएको आरोप लाग्यो । त्यसपछि उनीमाथि एफबीआईको अनुसन्धान लागू गरियो ।*****
Last Updated on: February 2nd, 2021 at 10:09 am